मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई त्रिशूलीमा खस्दा एकको ज्यान गय‍ो, अर्कोको अवस्था यस्तो ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई त्रिशूलीमा खस्दा एकको ज्यान गय‍ो, अर्कोको अवस्था यस्तो !
admin November 19, 2020 समाचार	0
चितवन – नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा ज मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
इच्छाकामना गाउँपालिका–६ चेपाङडाँडास्थित सडकबाट मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई त्रिशूली नदीमा खस्दा सो दुर्घटना भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकलको पछाडि सवार पर्वत जिल्ला कुश्मा नगरपालिका–१४ का २६ वर्षीय भेषबहादुर क्षेत्री रहेका छन् । सोही ठाउँ बस्ने मोटरसाइकल चालक अनिल विक गम्भीर घाइते भएका छन् ।
नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको ग७प २०२३ नम्बरको मोटरसाइकल साँझ ५ः५० बजेको समयमा अनियन्त्रित भई सडकदेखि ५० मिटर तल त्रिशूली नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा परी गम्भीर घाइते क्षेत्रीको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) भरतपुरमा उपचारका क्रममा साँझ ६ः४० बजे मृत्यु भएको हो । गम्भीर घाइते विकको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । (रासस)
दुःखद खबर – सानो गल्तीले सांसद जोशीकी परी जस्ती नातिनीले संसार छोडेर विदा भइन्! खासमा के भएको रहेछ हेर्नुहोस!!
बामदेव गौतमलाई फेरि धो’का हुने, बिष्णु पौडेललाई सरकारले च्याप्दै…
डाक्टरले मृत घोषित पोष्टमार्टम गर्न मुर्दाघर पुर्याईएका व्यक्ति जिउँदैछु बचाउ भन्दै रुन थाले पछी